Sceneries dị na Rikoooo na-adịghị kwuru na-akpaghị aka, bụ n'ebe a ngwọta? (Win 7 / 8 +) Usoro a na-arụ ọrụ abụọ Prepar3D na FS2004.By ndabara, FSX arụnyere na «C: \_ Faịlụ Mmemme (x86) \_ Egwuregwu Microsoft \_ 'Simulator Microsoft Flight…
Usoro a na-arụ ọrụ abụọ Prepar3D na FS2004.
Site na ndabara, FSX arụnyere na «C: \_ Faịlụ Mmemme (x86) \_ Egwuregwu Microsoft \_ Microsoft Simulator X». Nsogbu a bụ na Windows 7 na 8 + ma ọ bụ ọbụlagodi Windows 10 ị nweghị ikikere zuru oke nke faịlụ ndị dị n’ime Microsoft Microsoft Flight Simulator X, nke na-egbochi mmemme ide ihe na faịlụ nhazi. Iji dozie nsogbu ahụ, gaa na "C: \_ Mmemme Mmemme (x86) \_ Egwuregwu Microsoft ', wee pịa aka nri na folda« Microsoft Flight Simulator X », pịa« Njirimara », wee pịa taabụ“ Nche ”. N'ebe a, họrọ «Ndị ọrụ (xxxxxx)», wee pịa «Gbanwee». Na windo ahụ mepere, họrọ ọzọ «Ndị ọrụ (xxxxxx)», pịa «Nchịkwa zuru oke, wee« gbanwee ». Ugbu a, ị nwere nnọọ pịa «OK» na Windows ga-imelite ikike.
A na-adịghị ahụ anya nke ga-adị na akwa mmiri nke B777 m. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? (FSX/P3D) Oke Boeing777-300.gau, nke ekeberebere maka FS2004, anaghị arụ ọrụ na FSX na-enweghị otu DLLT iji dozie nsogbu a, ị ga - emerịrị…
The nlele Boeing777-300.gau, nke emebere na FS2004, anaghị arụ ọrụ n'ime FSX na-enweghị DLL a kapịrị ọnụ
Iji dozie nsogbu a, ị na-idetuo na mado na wdg « msvcr70.dll »N'ime FSXNnukwu nchekwa (C: \_ Faịlụ Mmemme (x86) \_ Egwuregwu Microsoft \_ Microsoft Simulator X). Y’oburu na inwere otu ihe banyere Prepar3D, ihe ngwọta a kwesịkwara ịrụ ọrụ. Ka o sina dị, anyị anwalela ya P3D.
Offọdụ n'ime m add-ons transperent ma ọ bụ isi awọ (enweghị ederede). Kedu ihe m kwesịrị ịme ? (FSX SP2 / Acceleration) Ihe di nkpa, mgbe inwere add-on nke emepụtara ihe ngosi 3D maka FS2004 mana eji FSX SP2 (nke akpọkwara…
Ihe di nkpa, mgbe inwere add-on nke emepụtara ihe ngosi 3D maka FS2004 mana eji FSX SP2 (nke a na-akpọkwa Port Port), bụ imebi Preview DirectX 10 na ntọala nke FSX. N’ezie, FS2004 addons adabaghị na DirectX 10.
Igbọ elu m na-aga n'ihu mgbe m gbanwere. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? (FSX) Ụfọdụ n'ime ụgbọelu gị na-akwụ ụgwọ na tarmac, otu ihe ahụ na-eme maka ụgbọala ndị ahụ gburugburu: nke ahụ bụ ahụhụ a maara, ...
Offọdụ ụgbọ elu gị na-akụ na tarmac, otu ihe ahụ na-eme maka ụgbọ ala ndị gbara ha gburugburu: nke ahụ bụ ahụhụ mara, nke enwere ike idozi site na ịgbanwee mkpebi «Mesh Resolution» na 5m kachasị. Na Ntọala Ngosipụta nke FSX, pịa taabụ «Mpaghara» ma gbanwee mkpebi ahụ dị ka egosiri n’okpuru:
FSX na-agbawa agbawa mgbe ọ na-agba Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 na ụgbọ elu na MP Oge. Enwere ndozi? Eji okwu abụọ dị mfe: Nzọụkwụ 1: Download UIAutomationCore.dllStep 2: Wepu faịlụ ZIP ma debe ...
Nzọụkwụ 1: Download UIAutomationCore.dll
Kwụpụ 2: Mechie faịlụ ZIP ma tinye UIAutomationCore.dll nke amịpụtara na mgbọrọgwụ nke gị FSX ebe echichi fsx.exe bi. Gbaa mbọ hụ FSX anaghị agba ọsọ.
Mgbe emechara omume a, bido FSX ị ga-ahụkwa ihe ndị na-agbanwe agbanwe FSX, adịghịzi akpata ya FSX ka okuku.
Enweghị mmezi a, FSX ga-anọrịrị ebe ị ga - anọ oge a 'a ga-agba izu'. Ejila ụdị ọzọ nke UIAutomationCore.dll, ebe ọ bụ na ụdị nke a bụ naanị ụdị ga-akwụsị mkpọka.
Esi arụnye FSX na Windows 8 / 8.1 / 10? Iji wụnye FSX (ntụgharị niile) na Windows 8 / 8.1, soro usoro ndị a: 1- Wụnye FSX Dabere na DVDs.2- Mgbe…
Gịnị bụ FSX SP1 na SP2? SP na-anọchite maka Service Pack 1 ma ọ bụ 2, nke patị na-akawanye mma FSX. Ha dị mgbe ahapụchara egwuregwu ahụ.Flight Simulator…
SP na-anọchite maka Service Pack 1 ma ọ bụ 2, nke patị na-akawanye mma FSX. Ha dị mgbe ahapụchara egwuregwu ahụ.
Flight Simulator X Service Pack 1 (Pịa ibudata) Agbaziri ndị na-esonụ mbipụta chọta ahịa mgbe egwuregwu ahụ apụta:
• ebighị na Installation
• Nsogbu na njikọ aka iji ihe ndị ọzọ components
• Mmelite nke arụmọrụ
• Nsogbu jikọrọ ọdịnaya
Flight Simulator X Service Pack 2 (Pịa ibudata) Mma ndị na-esonụ na ọrụ:
• Multiplayer ndakọrịta
I nwere iji wụnye Service Pack 1 (SP1), tupu nke abụọ na otu.
Kedu ka m ga - esi mara nke FSX arụnyere ụdị a na kọmputa m? FSX-SP1, SP2 ka ọ bụ ngwangwa? Knowmata ụdị nke FSX arụnyere na kọmputa gị, ọ dị mfe: Bido FSX, ma malite ụgbọ elu ebe ọ bụla ị…
Knowmata ụdị nke FSX arụnyere na kọmputa gị, ọ dị mfe: Bido FSX, wee malite ụgbọ elu ebe ọ bụla ịchọrọ, jiri ụgbọ elu ọ bụla ịchọrọ. Ugbu a, na elu ihuenyo gị, mepee menu menu (ma ọ bụrụ na emepebeghị ya) wee pịa «Enyemaka» aka nri. Ebe a, pịa «Ihe». Window na-eso nke a gosipụtara na nke gị FSX:
Etu esi ewepu Rikoooo kpamkpam add-on ? All add-ons si Rikoooo nwere ike iwepụ n'otu ụzọ ahụ: Nke a na-arụ ọrụ na Windows Vista, 7, 8 na 10.O…
All add-ons si Rikoooo nwere ike iwepụ n'otu ụzọ ahụ:
Nke a na-arụ ọrụ na Windows Vista, 7, 8 na 10.
Na desktọọpụ, pịa na « Malite NchNhr », Mgbe ahụ on« All Mmemme »Na-aga« Rikoooo Add-ons »
folda. Mgbe ịpịrị ya, ị ga-ahụ ndepụta nke add-ons ị wụnye na kọmputa gị. Ugbu a, ị ga
nwere ịhọrọ onye ị chọrọ iwepụ.
Ndị ọzọ usoro, site na Ogwe njikwa nke Windows họrọ Mmemme na atụmatụ ugbu a ị na-ahụ ndepụta nke gị niile arụnyere mmemme, họrọ onye ị chọrọ iwepụ.
Olee ebe ndị akwụkwọ ntuziaka, ReadMe.txt, Copyright etc? Site na mbipute auto-installers 10 ma ọ bụ ihe ndekọ niile dị na My Documents folda ma ọ bụ Documents dabere na Windows gị ...
Si akpaaka-installers version 10 ma ọ + niile documentations na-dị na My Documents nchekwa ma ọ bụ Documents dabeere na gị Windows version.
-Eso nke a nzọụkwụ site auto-installer ala karịa version 10:
Na desktọọpụ, pịa na « Malite NchNhr », Mgbe ahụ on« All Mmemme »Na-aga« Rikoooo Add-ons »Folda. Mgbe ịpịrị ya, ị ga-ahụ ndepụta nke add-ons ị wụnye na kọmputa gị.
Usoro ohter, ị ga - ahụ ihe niile edere n'ime folda nchekwa nke gị add-ons, dịka ọmụmaatụ: C: \_ faịlụ Mmemme (x86) \_ Egwuregwu Microsoft \_ Microsoft Simulator X \_ SimObjects \_ Airplanes \_ XXXX \_
Enweghị m ike ịhụ igbe «Preview DirectX 10» na ntọala nke FSX. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? Nke mbụ, chọpụta na inwere FSX-SP2 arụnyere na kọmputa gị. N'ezie, «Preview DirectX 10» na-egosi ma ọ bụrụ na…
Nke mbụ, chọpụta na inwere FSX-SP2 arụnyere na kọmputa gị. N'ezie, ndị « Preview DirectX 10 »Ga - egosi ma ọ bụrụ na itinyela oghere SP2 ma ọ bụrụ na ịchọrọ FSX Acceleration ma ọ bụ FSX Goolu ma obu FSX Ntugharị Steam.
Ụfọdụ isi gauges ma ọ bụ mmetụta na-efu efu. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? Mgbe ọtụtụ mgbanwe ka e mere n'ime «onu» nchekwa, ọ bụ Ugboro na akụkụ ...
Mgbe emeela ọtụtụ mgbanwe n’ime folda ‘ugedị’, ọ na-abụkarị na otu akụkụ nke faịlụ isi na-efu. Na ya, ọ bụrụ na add-on chọrọ asses chọrọ, ọ gaghị enwe ike igosipụta gauges ahụ n'ime otu panel. Ọtụtụ mgbe, ihe ngwọta na-esonye nrụnye FSX. Iji zere iweghachi FSX, ị nwere ike ibudata nlele Naghachi, Nke bụ obere mmemme kere site Rikoooo nke ga-weghachi ọ bụla mbụ faịlụ site «Gauges» na «Mmetụta» nchekwa.
Mmelite 13 / 02 / 2014: A Prepar3d a na-emepụta ụdị.
Prepar3D v2 na v3: Mmiri si na ndapụta na mmiri gbara ọchịchịrị, ahụghị m mmiri doro anya kristal Ihe kpatara nsogbu a bu na nbudata nke ngwaike Hardware Tessellation di na nhazi eserese nke Prepar3D v2 ma ọ bụ…
Nke a na nsogbu ndị ebighị nke ndị ọrụ Hardware Tessellation na nhazi eserese nke Prepar3D v2 ma ọ bụ v3.
Ebe a bụ a tụnyere mma Seychelles Photo Real mma Pack avalaible ebe a :
Na Hardware Tessellation nyeere
-Enweghị Hardware Tessellation nyeere
Dị ka e gosiri n'elu tụnyere, ajọ nkwarụ na ndị ọrụ Hardware Tessellation idozi nsogbu.
Mgbe ịmechara nri ị ga-amalitegharị Prepar3D ka nrụzi ahụ rụ ọrụ.
na Friday November 20 by rikoooo
A naghị ejikwa ihe ngosi rụọ ọrụ na-akpaghị aka Prepar3D v4. Ana m enweta ozi njehie mgbe m na-emeghe P3D Ndị ọrụ ọhụụ Prepar3D v4: Followinggbaso mgbanwe charset na Scenery.cfg ka UTF-16LE ndị na-arụ ọrụ ngwa ngwa enweghị ike ime ka…
Ndị ọrụ ọhụụ Prepar3D v4: Followinggbaso mgbanwe charset na Scenery.cfg ruo UTF-16LE ndị na-arụ ọrụ ngwa ngwa enweghị ike ịmebe ihe nkiri gị na akpaghị aka.
Ngwọta oge: Mepee folda C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 mepee faịlụ Scenery.cfg na Notepad wee pịa Njikwa - Chekwa Dị ka… Na mpio nke mepee họrọ UTF-8 n'ọhịa Encoding (lee foto dị n'okpuru) wee pịa Chekwa.
Ekwesiri imeghari ndozi a maka ndozi odide ọ bụla n'ihi P3D chekwaa faịlụ Scenery.cfg na UTF-16LE mgbe oghere nke ọ bụla gasịrị.
na Thursday September 07 by rikoooo
Mgbe m na-pịa bọtịnụ nbudata ọ dịghị ihe na-eme, gịnị ka ị ga-eme? Ị chere ma ọ dịghị ihe mere, ọ dịghị faịlụ a na-ebudatara, ikekwe mgbe nkeji ole na ole nke ichere ka ị natara njehie ...
Olee otú iji abanye na akaụntụ m? Ọ dị oke mkpa ịbanye na akaụntụ gị ka ịnụ ụtọ ọrụ anyị niile yana ọsọ Jumbo. Ka ewere…
Ọ dị oke mkpa ịbanye na akaụntụ gị ka ịnụ ụtọ ọrụ anyị niile yana ọsọ Jumbo. Iji mee nke a, ị ga-ahụ modulu na ihuenyo gị nke ọma n'okpuru nchịkọta nhọrọ na ibe niile nke weebụsaịtị. I nwekwara ike banye na mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị amasị gị dịka Facebook.
Banye aha njirimara gị (ma ọ bụ adreesị ozi ịntanetị) na paswọọdụ ị họtara onwe gị mgbe ị ghọrọ onye otu.
Mgbe nbanye ọganihu:
na Saturday August 08 by rikoooo
Olee otú ime ka m gbanwee paswọọdụ? Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịbanye na akaụntụ gị site na iji ntinye njikọ ahụ gaa n'elu. Pịa ...
Ihe mbụ na-eme bụ iji abanye na akaụntụ gị site na iji connexion modul n'elu. Pịa «Dezie akaụntụ m».
Ugbu a, ị dị nwere ịbanye gị ọhụrụ paswọọdụ ugboro abụọ, na ubi gosiri n'okpuru. Mgbe ahụ, pịa na «nyefere» ịzọpụta mgbanwe.
Echefuola m m paswọọdụ na / ma ọ bụ m na aha njirimara. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? Ọ bụrụ na ị chefuola gị paswọọdụ na / ma ọ bụ aha njirimara gị, enwere ngwaọrụ ndị ị nwere ike iji weghachite ozi ndị a: Echefuru m ...
Ọ bụrụ na i chefuola gị paswọọdụ na / ma ọ bụ gị na aha njirimara, e nwere ngwá ọrụ ndị ị pụrụ iji iji weghachite ndị a informations:
M na-echefu m paswọọdụ
M na-echefu m aha njirimara
Ọ bụrụ na ị ka na ike ịnweta akaụntụ gị, kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike ime ka ndị dị mkpa mgbanwe: Kpọtụrụ anyị.
My Jumbo ndenye aha na-arụ ọrụ, ma m download ọsọ ka na-ejedebeghị - Nke mbụ, lelee na iwu ahụ bụ "Jumbo OK" na-etinye ya n'akụkụ aka nri nke weebụsaịtị ...
- I kwesịkwara ịlele na ntanetị Ịntanetị na-enye gị ohere ime ntaneti ọsọ ọsọ. Ọ nwere ike ịdị mkpa ịnwa ule na kọmputa ọzọ na njikọ Ịntanetị ọzọ iji chọpụta na nsogbu ahụ adịghị na kọmputa gị.
Enweghị ike ịbanye, ọbụlagodi na iji aha njirimara na paswọọdụ ziri ezi, gịnị bụ ihe ngwọta ya? Anyị na-ebute ọtụtụ mgbanwe na ndozi, nke a bụ ihe kpatara na ọ nwere ike ime mgbe ụfọdụ na ọrụ nbanye anaghị arụ ọrụ…
Anyị na-ebute ọtụtụ mgbanwe na ndozi, ọ bụ ya mere na ọ nwere ike ime mgbe ụfọdụ na ọrụ nbanye anaghị arụ ọrụ ọzọ. Nke a bụ n'ihi mgbanwe ụfọdụ dị na sava anyị nke na-egotabeghị na akụkụ gị.
Iji dozie nke a, wepu kuki ndị jikọtara na nnọkọ gị na Rikoooo. Nwere ike ime nke a ozugbo na-esote njikọ a: https://www.rikoooo.com/fr/forum/user/delete_cookies A ga-ajụ gị ajụjụ n’asụsụ French ma ịchọrọ iwepu kuki ndị ahụ, pịa “Oui”. Emego. Ugbu a, ịnwere ike ịnwa nbanye. Wee pịa njikọ a https://www.rikoooo.com/board iji webụsaịtị ahụ laghachi na Bekee.
Ọ bụrụ n’inweta ozi njehie (karịa karịa ugboro abụọ) na-anwa ịbanye mgbe usoro a dị n'elu, mgbe ahụ ị nwere ike chefuola ozi nbanye gị.
Enwere ngwaọrụ ị nwere ike iji iji nweta ohere ịbanye na akaụntụ gị:
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta akaụntụ gị, kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike ịme mgbanwe ndị dị mkpa: Kpọtụrụ anyị.
na Tọzdee Juun 25 by rikoooo